China Mining rim China OEM emeputa nha nke 33 ″ ruo 63 ″ ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Hygg
OTR rim mmiri China OEM emeputa 25 ″ ...
Industrial rim maka Ọganihu inwego Tele handler China manu ...
Forklift rim maka Linde na BYD China OEM emeputa
Mining rim China OEM emeputa size si 33 ″ ...
Construction ngwá OTR rim maka Grader China OEM ...
Akpa ebuli rim iru stacker rim na efu conta ...
Mining rim China OEM emeputa
Construction Equipment OTR rim maka wheel Loader Chin ...
Ngwá Ọrụ Mwube OTR maka ebe a na-edepụta ya ...
Mining rim China OEM emeputa size si 33 ″ ka 63 ″
Ngwuputa rim bụkwa otu ụdị OTR rim na ọ na-eji tumadi na Ngwuputa igwe dị ka nnukwu wheel Loader, dozer, ụgbọala gwongworo wdg Mining rim e wuru maka siri ike ọnọdụ, ọ kwesịrị iburu arọ, ibu dị arọ na nnukwu ọsọ. Ihe gbajiri agbaji nwere ike ibute nnukwu ihe ọghọm na mfu akụ na ụba, ọ kwesịrị ka a tụkwasị ya obi, nwee ntụkwasị obi. HYWG na-enye akwa mkpuchi dị elu.
Kedu ihe nsị rim?
Mining rim bụkwa otu ụdị OTR rim na ọ na-eji tumadi na Ngwuputa ígwè dị ka nnukwu wheel Loader, dozer, dump gwongworo wdg Mining rime wuru maka ọnọdụ siri ike, ọ kwesịrị iburu ibu dị arọ, ibu dị arọ na oke ọsọ. AgbajikwaNgwuputanwere ike ibute nnukwu ihe ọghọm na mfu akụ na ụba buru ibu, ọ kwesịrị ka a tụkwasị ya obi, tụkwasị ya obi. HYWG na-enye ogo dị eluNgwuputa Ngwuputa.
Olee otú ọtụtụ iche iche nke Ngwuputa rim?
Nkọwapụta ya, Ngwuputa bụkarịrị 5-PC rim, nke a na-akpọkwa rim ise, a na-eme ya site na mpempe ise nke bụ isi rim, mgbachi mkpọchi, oche bead na mgbaaka abụọ n'akụkụ. Na-ewu ewuNgwuputa nha bụ 27.00-29 / 3.0, 28.00-33 / 3.5,17.00-35 / 3.5,19.5-49 / 4.0, 29.00-57 / 6.0, ruo 63 ", ụfọdụ rim ahụ si nha 51" ruo 63 "dịkwa 7-PC.
Kedu ihe eji egwu egwu?
Nke anyi Ngwuputa Ngwuputa enwere ike iji ya mee ihe maka ugbo ala dika:
(1) Akwụkwọ akụkọ Hauler
(3) Mkpọpu gwongworo
(4) Nnukwu Ulo Oru
Moddị Ndị A Ma Ama Anyị Na-enye
Rim nha Rdị rim Nha Taia Ngwaọrụ igwe Machinedị igwe
25.00-25 / 3.5 5-PC 29.5R25 Volvo A40 Akwụkwọ akụkọ Hauler
36.00-25 / 1.5 3-PC 1000 / 50R25 Vovlo A30 Akwụkwọ akụkọ Hauler
27.00-29 / 3.0 5-PC 33.25-29 Nwam 972M Nnukwu Ulo Oru
28.00-33 / 3.5 5-PC 35 / 65-33 Volvo L350 Nnukwu Ulo Oru
17.00-35 / 3.5 5-PC 24.00-35 Komatsu 605-7 Kpofuru ụgbọala
19.5-49 / 4.0 5-PC 27.00-49 Nwamba 777 Kpofuru ụgbọala
29.00-57 / 6.0 5-PC 40.00-57 Nwamba 793 Kpofuru ụgbọala
29.00-57 / 6.0 7-PC 40.00-57 Nwamba 793 Kpofuru ụgbọala
Anyị uru nke Ngwuputa rim?
(1) HYWG's interest bụ na anyị nwere igwe igwe igwe anyị nke na-ewepụta akụkụ rim dị ka mgbanaka mkpọchi, flange, mgbanaka akụkụ, oche bead site na anyị onwe anyị, anyị na-enye ogo dị elu yana ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
(2) HYWG nwere ọgaranya ahụmahụ na imewe, ule na mmepụta nke ụdị nile nke Ngwuputa rims.
(3) HYWG nwere ọtụtụ ngwuputa rim site na 49 ”ruo 63”, anyị nwekwara nha adịkarịghị ịhụ dịka ọmụmaatụ 36.00-45 / 4.5 na 36.00-25 / 1.5.
(4) A na-ekwe nkwa HYWG site na njedebe ngwa ngwa na ihe siri ike, ọtụtụ nchara anyị na-eji bụ Q345B nke yiri S355 na Europe na A572 na USA.
Ngwaahịa anyị gosipụtara nke ndị ahịa:
E gosipụtara oghere OTR anyị na XCMG nke na-ebu wiil kacha ibu na ụgbọala na-awụpụ ihe kachasị ọhụrụ na ngosipụta Bauma nke 2020.
Nke gara aga: Ewu ngwá OTR rim maka Grader China OEM emeputa
Osote: Forklift rim maka Linde na BYD China OEM emeputa